Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Hawaii Anyanwụ mara mma ma ọ bụghị nke kacha mma?
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa na Greece • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Indonesia • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ọmụmụ ihe ahụ lere ọnụ ọgụgụ akụkọ njem na blọọgụ nke na -akwado ebe ọ na -aga, ọnụ ọgụgụ nke posts Instagram na ọkwa mmetọ nke ọkụ mmadụ mere.
Ọmụmụ ihe ọhụrụ na -ekpughe ebe ọdịda anyanwụ kacha mara mma gburugburu ụwa.
Enwere ike ịchọta ọtụtụ ọdịda anyanwụ kacha mma na United States na Hawaii.
Ebe na -apụ apụ karịa nke ọzọ bụ agwaetiti Santorini nke Gris.
Site na mmachibido njem njem na -ebelata nwayọ, nyocha ọhụrụ na -ekpughe ebe ọdịda anyanwụ mara mma gburugburu ụwa na Hawaii bụ ebe nke atọ kacha mma.
Ọmụmụ ihe ahụ lere ọnụ ọgụgụ akụkọ njem na blọọgụ na -akwado ebe a na -aga, ọnụ ọgụgụ nke posts Instagram na ọkwa mmetọ nke ọkụ na -eme na mpaghara ọ bụla nyere ha akara ọdịda anyanwụ n'ime 10.
Ebe iri kacha mma maka ọdịda anyanwụ na ọwụwa anyanwụ
n'usoro Ebe Country Ọnụ ọgụgụ akụkọ/ blọọgụ Ọdịda anyanwụ Instagram posts Ọwụwa anyanwụ Instagram posts Ejikọtara ọdịda anyanwụ & ọwụwa anyanwụ Instagram posts Ihie (mcd/m2) Akara ọdịda anyanwụ
5 Nnukwu Ọdụ Mba nke Canyon United States 7 8,163 3,319 11,482 0.173 5.65
Ebe na -adịkarị iche karịa agwaetiti ọ bụla bụ agwaetiti Santorini nke Gris, nke ọtụtụ ndị chere na ọ bụ ọmarịcha mara mma nke ọtụtụ obere agwaetiti nke mba ahụ, ama ama maka nnukwu ugwu ya na ụlọ ọcha ya n'ụsọ Oké Osimiri Aegean.
Akwadoro Santorini n'ọtụtụ akụkọ karịa ebe ọ bụla ọzọ anyị lere anya yana ọ naghị ata ahụhụ site na mmetọ ọkụ dị ka obodo ukwu, na -enwupụta 0.627 mcd/m2.
Ebe nke abụọ kacha mma maka ọdịda anyanwụ bụ Bali na Indonesia. Bali nwere ọtụtụ osimiri n'akụkụ ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ dị ka Jimbaran Beach ebe ị nwere ike ilele anyanwụ ka ọ na -a withụ ihe ọ orụ orụ ma ọ bụ na -ata ka ị rie n'otu n'ime ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ asụ ka anyanwụ na -ada n'azụ oké osimiri.
Enwere ike ịhụ ọtụtụ ọdịda anyanwụ kacha mma na United States na Hawaii, gụnyere na ogige ntụrụndụ mba Haleakalā, mana Aloha Steeti bụkwa ụlọ nke ụfọdụ oke osimiri kachasị mma n'ụwa wee bata na ebe nke atọ na nyocha. Igwe aja ọcha na -egbu maramara nke oke osimiri Kohala zuru oke maka ikiri Oke Osimiri Pasifik ka ọ na -atụgharị na -enwu gbaa nke pink, odo, na oroma.